HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Soomaaliya
Posted by admin on June 11 2012 21:09:31
HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Soomaaliya,Siyaasada,bur burka Ahalusunada gobolada dhexe iyo halka ay martay ku dhawaad boqol Million oo Dolar oo ay lunsadeen madaxa iyo shaqsiyaad Soomaali ah. wararka maanta Jun/11/2012
HS:- Dowladaha Mareykanka iyo Yurub ayaa qorsheynaya sidii Jarleys Teylor-kii Laberia in ay maxkamad soo taagaan ku dhawaad 10 ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya iyo masuuliyiin iyagu maamula dhawr shirkadood oo waaweyn oo ka howl gala dalka iyo dibada.
Kadib markii ay lunsadeen in ka badan 100 Million oo dolar labo sano gudahood shaqsiyaad iskugu jira Soomaali iyo ajaaniib u fududeysay iney lunsadaan dhaqaalahaas walow xaalada hada ay u muuqato in looga kala siibtay Soomaalida kaliya ayaa hadane waxaa la dhihi karaan dalka Soomaaliya ka hor doorashada soo socota baaritaan aan caadi aheyn ayaa lagu hayaa masuuliyiinta dowlada kuwoodii joogay 2009 ilaa hada .
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya dad aad ugu ag dhaw siyaasadaha dibada iyo sida loo bahdilo hogaamiyaasha Africanka ah marka laga dhameysto dantii laga lahaa ayaa sheegaya in baaritaanka ugu culus lagu hayo labada Shariif iyo R/wasaaraha hada jira walow raga kale loo see seexanayo ilaa ay saxada siyaasada si toos ah u soo galaan sida 3daasi masuul ee aanu kor ku soo sheegnay.
Dowladahan aan kor ku soo sheegnay oo dhaqaalaha ugu badan ay ka maqan yahiin ayaa qorsheynayo in dalka Soomaaliya dowlada soo socota min baarlamaan ilaa hogaanka dalka ay noqdaan wajiyo cusub taasi oo meesha ka saareysa damaca waalidaa ee ay hada wadaan hogaanka sare ee TFGda hadii aan xaqiiqada dibada taalo leyska indho tireyn.lagama hadlayo dhaqaalaha laga helo dowladaha Islaamka siiba Carabta ee cadaanka u soo galayey dowladahii ugu danbeeyey.
Siyaasada Soomaaliya waxey maanta mareysaa sidii loo ogaa in Shiikh Shariif madaxweynaha Soomaaliya noqonayo shirkii Jabouti xili Nuur Cade oo la doonayey inuu kaka taqalusiyo madaxweyne Cabdullaahi Yusuf loo lahaa adigaan kugu bedeleynaa ee meesha odeyga ka saar kadibna isagii oo taagan lagu dul doorto Shiikh Shariif ayaa sidiii oo kale ragaan Roadmapka iyo dastuurka lagu mashquuliyey ay rag kale oo wajiyo cusub ah ugu falayaan jidka maadaama dalka Soomaaliya ay ka dhalaneyso dowlad rasmi ah.
Dhinaca kale mid ka mid ah kooxahii ka dagaalamayey dalka Soomaaliya ee xukun doonka ahaa siiiba kooxda Ahalusuna waljameeca ayaa iyaguna daaqada ka baxay kadib markii ciidamadii kaka sugnaa gobolada dhexe ay noqdeen wax cararay iyo wax qurbaha u dhoofay tasi oo meesha ka saareysa iney ku korkortamaan doorashada soo socota dhul badan ayaanu heysanaa iyo wax la mid ah.
Hadaan u gudubno gobolada dalka